वेबसाइटमा किन छन् भिजिटर कम? - Nepali Virals
वेबसाइटमा किन छन् भिजिटर कम?
६ मंसिर २०६९, बुधबार १६:५१	434 पटक-पढिएको
वेबसाइट, इन्टरनेटको जालोमा समेटिएको विश्वमा सूचना, ज्ञान र व्यवसायको माध्यम नै यही डब्लुडब्लुडब्लु बनेको छ। हरेक विषयमा अनि हरेक व्यवसायका ’boutमा एउटा वेबसाइट त पक्कै छ इन्टरनेटमा। कतिपय निशुल्क होलान् त कतिपय सशुल्क। त्यति मात्र नभएर अब व्यक्तिका लागि पनि वेबसाइट आवश्यक हुन थालिसकेको छ। आफ्ना विचार देखी क्षमता देखाउन र त्यसबाट आमदानीको बाटो खोज्नका लागि अपरिहार्य बनेको छ वेबसाइट। निशुल्क बनेका वेब पब्लिसिङ सफ्टवेयर र सस्तिएको होस्टिङ का कारण पनि हरेकलाई वेबसाइट चलाउन सजिलो भएको छ। त्यसमा पनि गुगल एडसेन्सको विज्ञापनको आर्थिक लाभको पक्ष पनि छ। त्यसैले ब्लग र वेबसाइट खोल्नेको लहर चलेको छ।
तर पनि सबैका वेबसाइट सफल छैनन्। आमदानी गर्न होस् या वेबस्पेशमा राम्रो स्थान बनाउनका लागि। ’cause वेबसाइटमा सामग्री मात्र भएर हुँदैन। त्यसबाहेक पनि धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ। यदी ब्लग तथा वेबसाइटमा सामग्री राम्रो छ। समय समयमा अपडेट पनि गर्नु भएको छ। फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जामा पनि राम्रै उपस्थिती छ। गुगल एडसेन्स मार्फत विज्ञापन पनि गर्नु भएको छ। तर पनि तपाइँको वेबसाइट तथा ब्लगमा भिजिटरको संख्या राम्रो छैन भने तपाइँले आफ्नो ब्लग तथा वेबसाइटका लक्षित भिजिटरको पक्षबाट आफ्नो वेबसाइटलाई हेर्नु भएको छैन।
वेबसाइट इन्टरनेटका नेटिजनलाई हेराउनका लागि त्यसमा सामग्री मात्र आकर्षक भएर हुँदैन। त्यसको डिजाइन, त्यसमा भएका विज्ञापन साथै त्यसको ब्याण्डवीथ लगायतका धेरै कुराले यसमा महत्व राख्छन्। यी अनेकन वेबसाइटका पक्ष मध्येको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो तपाइँको वेबसाइट हेर्ने पाठकको कम्प्युटरमा कति छिटो डाउनलोड हुन्छ? तपाइँको भन्दा प्रतिस्पर्धीको वेबसाइट छिटो डाउनलोड त हुँदैन ? वा तपाइँको जस्तै सामग्री भएका एवं लक्षित पाठक उस्तै भएका अरु वेबसाइट भन्दा तपाइँको डाउनलोड स्पिड रेट कति छ? यो कुरा वेबसाइट तथा ब्लग सञ्चालकले जान्नु साथै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो।
इन्टरनेटमा विभिन्न वेबसाइट हेर्ने पाठकले सबै भन्दा ध्यान कुन छिटो डाउनलोड हुन्छ भन्नेमा दिन्छ। त्यसैले पहिला आफ्नो वेबसाइटको डाउनलोड स्पिड जाँच गर्नुहोस्। यो पनि तपाइँको भिजिटर कम बनाउने पक्ष हुनसक्छ। जसका लागि विभिन्न वेबसाइट तथा अनलाइन सफ्टवेयरहरु उपलब्ध छन्। ती मध्येको यो हृवीच लोडस् फास्टर एउटा उपयुक्त विकल्प हो। त्यसका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्। जसले दुई वेबसाइट मध्ये कुन छिटो खुल्छ वा पाठकको कम्प्युटरमा छिटो डाउनलोड हुन्छ त्यो देखाउँछ। जसमा आफ्नो बाहेक अरु प्रसिद्ध वेबसाइटहरुको डाउनलोड स्पिड कस्तो छ पनि थाहा पाउन सकिन्छ। (तस्विरहरु यो पोस्टका लागि नेपालका तीन समाचार पोर्टल अनलाइनखबर, इकान्तिपुर र नागरिक न्यूजलाई परिक्षण गरिएको स्क्रिनसट हुन्।)
अघिल्लो हेरौं फ्रिमा फिल्म
पछिल्लो के तपाइँको वेबसाइट छ सुरक्षित?